Uncategorized Archive - व्यावसायिक निर्माण धातु भण्डारण उपकरण धातु कन्टेनर,ट्रली,चटाई,र्याक,रोल कन्टेनर आदि
2021 सूची Yougu भण्डारण उपकरण डाउनलोड
2021 सूची Yougu भण्डारण उपकरण डाउनलोड : yougu storage equipment catalog 2021 new
1. Foldable metal cage, वैज्ञानिक र व्यावहारिक डिजाइन, जनशक्ति आपरेशन लागत न्यूनतम र अपरेशन सुरक्षा वृद्धि; फोल्डेबल संरचना, खाली फिर्ता कम लागत; 2. प्यालेट ईन्जिनियरिंग संरचना डिजाइन उचित छ, सबै भाग सटीक मोल्ड द्वारा उत्पादित छन्, विनिर्देशहरू एकीकृत छन्, र 1mm को सहिष्णुता कायम छ; all the parts that are easily damaged and consumable are all…
1. भण्डारण केज स्टोरेज केज, धातु जाल केज पनि भनेर चिनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रिय शैली अपनाउँछ. फोल्डिंग पछि भोल्युम मात्र हो 1/3 भेला भोल्यूम को जब. यसमा हल्का तौलका फाइदाहरू छन्, कम फ्लोर स्पेस र सुविधाजनक संयोजन. यो व्यापक रूपमा बन्द लूप वितरण प्रणाली केन्द्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै भाग वितरण, सानो उपकरण, मोल्ड प्रसंस्करण, इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू,…
1. मोबाइल शेल्फ (स्ट्याकिङ रैक) मोबाइल शेल्फ (स्ट्याकिङ रैक) उत्पादनहरू दुई प्रकारमा विभाजित छन्: स्थिर र अलग गर्न योग्य. उनीहरूको समान वर्दीकरण छ, स्थिर क्षमता, शेल्फ उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन, र एक अर्का स्ट्याक गर्न सक्नुहुन्छ, यसैले एक तीन-आयामी भण्डारण क्षमता गठन र बहु ​​वस्तुहरूको स्ट्याकिंग महसुस. ठाउँको पूर्ण उपयोग गर्नुहोस्, साधारण संरचना, राम्रो लोड-बोक्ने प्रदर्शन, सुविधाजनक प्रयोग, safe and…
अधिक र अधिक गोदामहरूले गोदाम प्यालेटहरू र सामानहरू प्रबन्ध गर्न 5s प्रयोग गर्दछ. धेरै कम्पनीहरूले सफलतापूर्वक 5s प्रबन्ध लागू गरेका छन्, तर केहि कम्पनीहरूले ss प्रबन्धनमा जोड दिँदैनन्. किन गोदामलाई 5s प्रबन्ध आवश्यक पर्दछ? पहिलो, s एस व्यवस्थापनको कार्यान्वयनले गोदाममा प्रायः समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ. कुनै मलबे छैन, उपकरण, सामग्री, र उपकरणहरू गोदाममा स्ट्याक हुन्छन्. The…
काम पुनः सुरु गरेपछि, उद्यमहरूले अर्डरमा बढ्दो सामना गरे र गोदाम व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरीहरूलाई उजागर गरे. गोदाम क्षमताको अभाव र प्यालेटको अभावले कम्पनीहरूले व्यवस्थापन चक्रहरूको बारेमा सोच्न थालेका छन्. वितरण सटीकता कसरी सुधार गर्ने, सूची सटीकता, र वितरण दक्षता एक समस्या हो जुन कम्पनीहरूले व्यवहार गर्नुपर्दछ, and the loopholes in the store…
Foshan Yougu भण्डारण उपकरण कं, लिमिटेड डिजाइन र निर्माण सबै प्रकारको धातु गोदाम रसद भण्डारण कन्टेनर मा विशेषज्ञ, पिंजरे, चटाई, ट्रली, स्ट्याकिङ रैक, चटाई, आदि जुन पूर्ण रूपमा भण्डारण समाधान प्रदायक हो. यो हाम्रो नवीनतम उत्पादन हो, भण्डारण फलाम फ्रेम, उत्पादनहरू गोदाममा राख्न प्रयोग गर्नुहोस्. यदि तपाईं हाम्रो उत्पादनहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, you can contact us to inquire about…
एक ट्रली के हो र यसले के गर्छ?
ह्यान्डकार्ट एक बोक्ने गाडी हो जुन धक्काले र जनशक्तिले तानिन्छ. यो सबै सवारी साधन को पूर्वज हो. ट्रालीका लागि सामग्री ह्यान्डलिंग टेक्नोलोजीको निरन्तर विकासको बाबजुद, ट्रालीहरू आज पनि एक अपरिहार्य ह्यान्डलिंग उपकरणको रूपमा प्रयोगमा छन्. ट्राली उत्पादन र जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ किनभने यसको कम लागत छ, साधारण रखरखाव, सुविधाजनक अपरेशन, light…
काठको शेल्फ र धातु शेल्फ बीच के भिन्नता छ??
साधारणतया, हाम्रो दैनिक जीवनमा साधारण शेल्फहरू धातुको शेल्फहरू र काठका सल्फहरू हुन्छन्, जुन हाम्रो जीवनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ. यद्यपि ती हाम्रो सामान्य सुपरमार्केटहरूमा प्रयोग भैसकेका छन्, तिनीहरूको प्रयोग फरक छ, के विशिष्ट मतभेदहरू छन्? काठका तखताहरूलाई ठोस काठ शेल्फ र ताजा शेल्फ पनि भनिन्छ. यो शपिंग मल्लमा सामान्यतया प्रयोग हुने शेल्फ हो, supermarkets…
शेल्फका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामग्रीहरू के हुन्?
शेल्फहरू सामान्य शब्द हो जसमा धेरै सामग्री हुन्छन्. त्यसो भए कति बजारमा तखताहरू छन्? सामग्री अनुसार, यो लगभग निम्नलिखित प्रकारहरु मा विभाजित छ: 1) इस्पात शेल्फहरू: यो बजारमा सब भन्दा बिक्री हुने विविधता हो. भण्डारण देखि सुपरमार्केट सम्म, इस्पात शेल्फहरू सबैभन्दा ठूलो बिक्री मात्रा छ. The reason is that the…
कस्तो प्रकारको शेल्फहरू फलफूल र तरकारीहरूका लागि उपयुक्त छन्?
सबै भन्दा पहिले, तपाईले शेल्फ प्रदर्शन क्षेत्र अनुसार छनौट गर्नुपर्नेछ. यदि यो एक नयाँ सुपरमार्केट शेल्फ मध्यम क्षेत्र मा राखिएको छ, तपाईं फल र तरकारीहरू जस्तै उत्पादनहरूका लागि डबल-पक्षीय संरचना शेल्फ रोज्न सक्नुहुन्छ. जे भए पनि ग्राहक कुन कोणबाट हिँड्छ, उसले ताजा शेल्फमा उत्पादनहरू देख्न सक्छ, which can formagreater…
शेल्फका साथ धातु प्यालेटहरू कसरी प्रयोग गर्ने?
धातु प्यालेटहरू रसद यातायात र भण्डारण कारोबार मा एक सामान्य रसद उपकरण हो, र यो पनि भण्डारण तखतको साथ संयोजनको रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने भण्डारण उपकरण मध्ये एक हो. धातु प्यालेटहरूको प्रयोगले फोर्कलिफ्टको साथ सामानहरू सिधा भण्डारण तानाहरूमा सार्न सजिलो बनाउँदछ, which not only provides work efficiency but also…
पृष्ठ 1 को 512345»